२० पार गरेपछि... महिलामा हुन्छ यस्तो परिवर्तन - Hamro Filmy News
महिलाको उमेर २० पार गरेपछि केहि चिजहरुको परिवर्तन हुन्छ। उनीहरुकको उमेरसँगै हरेक चिजमा परिवर्तन आइरहन्छ। यसबेलामा अनेक खालका स्वास्थ्य समस्या समेत उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा स्वास्थ्य जाँच गराइराख्नु पर्ने चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।
२० वर्ष पार गरेपछि महिलामा आउने ५ परिवर्तन हर्मोनको असन्तुलन बढ्दै जान्छ । जसका कारण महिनावारीमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । फलफूल र सब्जीमा प्रशस्तमात्रामा आइरन, भिटामिन, मिनरल्स पाइन्छ । महिनावारीमा समस्या समाधानका लागि प्रशस्तमात्रामा फलफूल र हरियो सब्जी खानुपर्ने हुन्छ । उमेरमा परिवर्तनसँगै महिलामा देखिने अर्को परिवर्तन कपाल (रौं) हो । महिलाको गुप्तांग, छाती र पेटमा अस्वाभाविक रुपमा कपाल उम्रन सक्छ । यस्ता अस्वाभाविक कपाल हटाउनको लागि क्रिम या रेजको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । रेजरको सहायताले रौंलाई स्थायीरुपमा समेत हटाउन सकिन्छ ।
हर्मोनमा आउने परिवर्तनका कारण कपाल सुख्खा तथा जिंग्रिङ्ग बन्न पनि सक्छ । यस्तो बेला ३/४ चम्चा जैतुनको तेलले मालिस गर्दा उत्तम हुन्छ । युवतीमा देखिने अर्को समस्या-डन्डीफोर । हर्मोनमा हुने परिवर्तनका कारण डन्डिफोरका साथै छाला सुख्खा हुने समस्या समेत उत्पन्न हुनेगर्छ। चिल्लो खानेकुरा कम खानुस्, साथसाथै दिनको २ देखि तीन पटकसम्म अनुहार धुँदा उत्तम हुन्छ । यसले अनुहारमा चिल्लोको मात्रा कम हुन्छ र डन्डिफोरको समस्या हट्छ ।
प्रेम गर्नेहरुका लागि विशेष दिन 'भ्यालेन्टाइन्स डे', के हो भ्यालेन्टाइन्स डे कसरी शुरु भयो?
कपाल झर्ने समस्या छ? यसरी गर्नुहोस् घरमैं उपचार
filmy news - March 19, 2021 0
नायिका सुरक्षा पन्त नेपाली फिल्मी इन्डस्ट्रीमा अब्बल नायिकाको रुपमा चिनिन्छन् । बुटवलमा जन्मिएका सुरक्षा इन्जिनियरिङकी विद्यार्थी हुँदै अभिनय क्षेत्रमा आएकी हुन् । चलचित्र ‘अझै...
filmy news - March 14, 2021 0
कुनै पनि महिलामा पुरुषले सुन्दरता बाहेक धेरै कुरा खोज्छन् । त्यस मध्ये पहिलो कुरा हो आत्मविश्वास । पुरुषलाई महिलामा कति आत्मविश्वास छ र कति...
filmy news - February 16, 2021 0
दक्षिण भारतीय सिनेमामा निकै चर्चित अभिनेत्री हुन् काजल अग्रवाल । उनी हालै विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छन् । एक महिना अघि विवाह गरेकी कागजले विवाह...
प्रेम गर्नेहरुका लागि विशेष दिन ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’, के हो भ्यालेन्टाइन्स डे कसरी शुरु भयो?
filmy news - February 12, 2021 0
फेब्रुअरी १४ प्रेम गर्नेहरुका लागि विशेष दिन अर्थात् भ्यालेन्टाइन्स डे । तर्क गर्नेहरुले त भन्छन्, यो पश्चिमा संस्कृति हो । आयतित संस्कृति हो ।...
filmy news - December 20, 2020 0
डान्सिङ वीथ द स्टार्स नेपालको उपाधी सुमी मोक्तान र भिजु पार्कीले हात पारेका छन् । यो उपाधी संगै यो जोडीले २० लाख नगद पुरस्कार...